कसरी राम्रो कामहरू संग नकारात्मक विचार को छुटकारा र प्रतिस्थापन गर्न तिनीहरूलाई
तपाईं कहाँ आफ्नो कल्पना चित्र कोर्दछ अवस्था थाह खुसी छैन, र तपाईंले "देखेको" भनेर बुझ्न थप कुनै राम्रो छ, तपाईं रोक्न सक्दैन? तपाईं उसलाई खराब अन्त्य संग नै कथा अगाडि स्क्रोल, तर आफूलाई torturing रोक्न वा चाहनुहुन्छ सक्दैन। कसरी खराब विचार को छुटकारा गर्न? तिनीहरूले तपाईंलाई नेतृत्व जहाँ तपाईं बुझ्न गर्दा र जहाँ तपाईं आउन चाहेको यो सम्भव छ।
भोलि युद्ध भने
का एक एकदम साधारण अवस्था सुरु गरौँ। पेश तपाईंको सपनाहरू वास्तविकता गर्न धेरै टाढा सम्बन्ध छ संभावना छ, तथापि, यो परिदृश्य आफ्नो टाउको मा नियमित रूपमा परिलक्षित डर झन् खराब विचार underpins कि प्ले छ, र प्रत्येक समय। कसरी यस मामला मा खराब विचार को छुटकारा गर्न? पहिलो, तपाईंले आफ्नो डर खुवाउने मा खर्च भएको समय र ऊर्जा धेरै फरक डिजाइन को embodiment निर्देशित हुन सक्छ भन्ने महसुस। दोस्रो, तपाईंको कल्पना मा कहानी गलत तरिकामा विकास गर्न सुरु जो देखि क्षण पहिल्याउन। अक्सर दिनचर्या मामिलामा समयमा वा सुत्नेसमय मा जा बारेमा सोच संसारको आगामी अन्त गर्न संक्रमण संग वास्तविकता देखि "विच्छेद"। राति मध्यम व्यायाम, मा stimuli को कमी मिडिया को फारम र मल्टिमिडिया र समसामयिक सुत्न जाँदै थप सुखद विचार वा तिनीहरूलाई सबै बिना रात पूरा गर्न मदत गर्नेछ। दिन को समयमा तपाईं विवरण मा जाने गरिरहेका छन् के गर्न थप ध्यान, परिचित गरिरहेको नयाँ तरिकाहरू। जसको टाउको र हात व्यस्त छन् एक मानिस, अवस्थित कठिनाइहरू आविष्कार गर्न कुनै समय। विचार धेरै टाढा भयो भने, एक फरक अन्त्य समाप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र जंगली कल्पना रत्तीएको एक प्रयास असफल भएमा, र डर थप सम्भाव्य बन्ने छ, आफ्नो वास्तविक कारण पत्ता लगाउन एक मनोवैज्ञानिक परामर्श।
भोलि यदि फेरि deuce
यदि साँच्चै अप्रिय अवस्था छ कसरी, खराब विचार को छुटकारा प्राप्त गर्न, नतिजा जो तपाईं असर गर्न सक्छ? को क्लासिक बारी। पनि Deyl Karnegi हिजो र भोलि को दिन कुनै जडान जो सिल गर्ने पनडुब्बी को, खण्ड रूपमा आज रिपोर्ट गर्न सल्लाह। उहाँले पनि विस्तृत प्रस्तुत गर्न स्थिति को खराब-मामला परिदृश्य सिफारिस र ... पनि यो मामला मा, जीवन मा जान्छ भन्ने महसुस गर्न, यो संग बाँचिरहेका छौं। यो तपाईं यस्तो दबाब स्थिति समाधान गर्न आशा छैन सम्भव छ, र नतिजा तपाईं निराश छैन: खराब, तपाईं तयार थिए, र तपाईं डराएको छैन भनेर।
आधुनिक लेखक अक्सर शाब्दिक शारीरिक यस प्रक्रियामा संलग्न, को सिफारिस "prosmeyat" अवस्था फेला परेन। र कुनै कुरा यो पहिलो कृत्रिम हँसी लाग्न सक्छ कसरी, यो सरल चाल साँच्चै फिक्री सामना गर्न मद्दत गर्छ। हाम्रो मनोवृत्ति तत्काल परिवर्तन गर्ने धेरै त, र अवस्था नै।
यदि कसैले - एक "खराब मान्छे"
के तपाईं विशिष्ट व्यक्ति विरुद्ध खराब विचार भ्रमण भने? र तिमी किन ख्याल गर्छन्? घरजम गहिरो रिसले विष सक्नुहुन्छ मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य धेरै वर्ष को लागि। विभिन्न लेखक र offender क्षमा, र अतिरिक्त वजन बिना बाँच्न उठयो विभिन्न तरिकाहरू वर्णन गरेका छन्। तथापि, नकारात्मक विचार को, वर्षौंदेखि छुटकारा प्राप्त गर्न संचित एक लेखमा तपाईं बताउन कसरी सम्भव छैन, तर यो काम एकै रातमा गरेको छैन। तर भावना को प्रकोप नियन्त्रण गर्न, जब हृदयमा अन्त्य गर्न, चाहनुहुन्छ "उहाँले हो ... कि" चाहिन्थ्यो। "थप उहाँलाई त्यो राम्रो स्वास्थ्य थियो, र पैसा।" के तपाईंको सबैभन्दा डरलाग्दो श्राप गरौं बलियो भावनात्मक सन्देश वाक्यांश आफ्नो शत्रु गर्न हानि ल्याउन छैन संग ठूलो स्वरले वा मनमनै भन्यो, र तपाईं राम्रो तपाईं उसलाई चाहन्थे कि सबै, धेरै फर्कन भने!
र अन्तमा - मा उनि जन्म थिए अघि खराब विचार उन्मुक्ति कसरी केही सुझावहरू। पहिलो - आफ्नो आँखा र कान सुरक्षित गर्नुहोस्। तपाईं समाचार विरक्तलाग्दो भने, जनावर बारेमा कार्यक्रम हेर्दै। दोस्रो - अधिक व्यापार। हेड घरमा एक पाल्तु जनावर को - तपाईं उदास, र कथाहरू भोक कुकुर एक बारेमा, खुवाउन, तर राम्रो भने। धनी तालिका र एक ठूलो हदसम्म समसामयिक बाँकी र उनको टाउको मा आदेश बहाल गर्न योगदान। राम्रो कामहरू गर्न, सुन्दर संग आफ्नो चारै ओर - र विचार kinder हुन्छन्।
धीरज - एक ... शारीरिक धीरज। धीरज सीमा। धैर्यको विकास
प्रेम के हो? मनोविज्ञान: प्रेम को स्थिति
Superficiality, गुणस्तर, बुझ्नका
Protivohodstvo - समस्या र यसलाई लड्न तरिका को पहिचान
जाली फूल खडा: पुरातन शिल्प हाम्रो जीवन decorates
सबै भन्दा राम्रो ब्रश काठको नुस्खा
जब त्यहाँ सौर eclipses थिए? कुल सौर ग्रहण (वर्ष)
क्लब सेरेना होटल: यो एक सुन्दर होटल कसरी गर्ने? समीक्षा
फ्रेम - यो के हो?
Juicer दारिम - एक सुविधाजनक उपकरण
अमेरिकी अभिनेत्री Frances किसान: जीवनी, Filmography र रोचक तथ्य
आधुनिक तराजू: को मात्रा प्रकार। उपकरणमा मापनहरू र प्रकार के हुन्